WaiYanLin: Tooler - Shortcut Your Computer
ရေးသားသူ Wai Yan ရေးသားသောအချိန် 12:20 AM
အင်း.. အသုံးတော့ ၀င်သားဘဲ။ ဒါပေမယ် သဉ္ဖာ့ desktop က အစကတည်းက ခပ်ရှုပ်ရှုပ်.. ဒါတွေကလည်းထည့်ချင်သေးတယ်။ နောက် desktop ကို ရှင်းရှင်းထားနည်းဆိုပြီးတော့ post တစ်ခုလောက် ရေးဦးနော်...
Desktop မှာရှင်းနေချင်ရင်တော့ မလိုတဲ့ဟာတွေကို ဖယ်လိုက်ပေါ့ အမရယ်။ အသုံးနည်းတာတွေကို Shortcut မတင်ထားရင် ရှင်းနေမှာပါဗျာ။ နောက်ပြီး အမျိုးအစားတူတာလေးတွေကို စုပြီးဖိုလ်ဒါတစ်ခုအောက်မှာ ထားလို့လည်း ရပါတယ်။ ဒါဆို မျက်စိ မရှုတ်တော့ဘူးပေါ့။
သူလေးရဲ့ရင်ထဲကို တိုက်ရိုက်သွားလို့ရတဲ့ Shortcut လေးများရှိရင် မစပါဗျာ. သွပ်သွပ်သွပ်...